Fantatrao ve ny fomba ahafahana manao backlinks amin'ny SEO araka izay azo atao?
Tsy ilaina ny milaza fa ny tompon'ny webmaster sy ny tompona orinasa rehetra dia tokony hahafantatra ny fomba hatao amin'ny backlinks amin'ny SEO - noho ny fandefasana Internet bebe kokoa, ary amin'ny farany dia mahazo tombony amin'ny toerana ambony ao amin'ny SERP. Saingy inona no mahatonga ny SEO ho sariohatra ahafahana mijery ny tranonkala na bilaogy rehetra? Fanaraha-maso amim-pitandremana sy fanamarinana, ary fanaraha-maso haingana dia haingana mba ho azo hifehezana tanteraka ny herin'ny fahazoan-dàlana hokarakarain'ny tsirairay.Amin'ny teny tsotra, raha vao manomboka mametraka ny lanjany ny alàlan'ny backlink, dia tokony havaozina indray mandeha na avy eo nesorina avy hatrany. Ka ahoana, manao ahoana ny momba ny backlinks amin'ny SEO? Andeha hojerentsika izany - ity dia dingana iray mitohy - 3 angebote einholen weg. Nalaina an-kalalahana izy io, nampifandray ny fitaovana ankapobeny amin'ny fananganana rohy sy ny fikojakojana tsy tapaka miaraka amin'ny fandaharam-potoana fanaraha-maso.
Inona no mahatonga ny fichier tsara
Alohan'ny zavatra hafa, ny takelaka "tsara" (raha tsy izany, voajanahary na organika) , na loharanom-baovao an-tserasera hafa. Avy eo, loharanon-tsarimihetsika tsara dia tokony hanana sanda mety amin'ny PR (pagerank), DA (tompon'andraikitry ny sehatra), ary ny PA (fahefana). Raha ny marina, ny kandidà rehetra mety hifaneraserana (na tranokala na bilaogy) dia andrasana hananana votoatin'ny pejy misy feo, izay manome ny hasarobidin'ny mpampiasa.
Ny tsara indrindra, ny votoaty toy izany dia tsy maintsy milaza fa tsara ny mizara amin'ny media sosialy. Ny tiako holazaina dia tokony haverina haingana kokoa ireo asa fanoratana tsotra ireo - farafaharatsiny mba hialana amin'ny fifaninanana - amin'ny grafika manintona sy mampahafantatra, sariitatra, informatika, tabilao, na fitaovana hafa rehetra ahafahana mampiseho ny zava-drehetra ao amin'ny tsotra indrindra ary mazava tsara. Raha ny marina, ny fanavaozana ny votoatin'ny pejy natsidinao ho toy ny mpampiasa kokoa dia mety ho fanapahan-kevitra mety ihany koa ho an'ny tranonkalanao na blôgy anao. Noho izany, mitadiava fotoana sy ezaka fotoana hanavaozana ny votoatiny lava indrindra, na angamba ny ampahany ratsy indrindra ho sarotra loatra amin'ny famakiana sy fakana. Amin'izany fomba izany, miaraka amin'ny sombin-tsokon'ity mpampiasa ity sy ny "votoaty mora azo" dia tsy vitan'ny hoe mamerina rindran-kiana bebe kokoa, mizara, manonona, mitarika ary famandrihana - fa mamindra bebe kokoa ny fifamoivoizana Internet.
Ny fomba fanaovana backlinks ao amin'ny SEO
dia miankina amin'ny tetikady fanorenana rohy mifototra tsara;
miezaka mampiasa ny traikefa tsara indrindra amin'ny marketing dizika;
dia manana fandaharam-potoana fanaraha-maso matetika mba hanaraha-maso ny backlinks - na ny habetsahany sy ny kalitaon'ny profil;
manorata lahatsoratra na lahatsoratra amina blaogy mba hamoahana azy ireo amin'ny loharanom-baovaon'ny mpamorona;
dia miompana tranokala na blôgy tena mendrika ihany, izay tokony hifanaraka amin'ny lohahevitra momba ny fandraharaham-barotra, orinasa na orinasa na farafaharatsiny.
Anisan'ireo karazana fikarohana momba ny fikarohana sy soso-kevitra miverimberina aho, nandinika ny Semalt Analyzer (Semalt), Tranokala Open Site Explorer (Moz), ary Majestic SEO aho tamin'ny tranokala ecommerce vao haingana.Raha ny zava-drehetra, afa-tsy ianao ihany no manapa-kevitra ny hanao ny rindranasa ao amin'ny SEO, ary ny fitaovana an-tserasera hanandrana aloha. Farany, aza adino fa mety ho toa tsy misy ilàna azy mihitsy ny rohy vao noforonina. Mazava ho azy, raha omena rohy mankany amin'ny tranokala na blôgy ianao, izay tena malemy loatra amin'ny resaka SEO mihoatra ny anao.